မြန်မာနိုင်ငံကို R2P ဝင်တော့မှာလား … ? | BurmeseAsia
Home News မြန်မာနိုင်ငံကို R2P ဝင်တော့မှာလား … ?
မြန်မာနိုင်ငံကို R2P ဝင်တော့မှာလား … ?
R2P ၀င်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂလိုဘယ်အာတူးပီအဖွဲ့ ထည့်သွင်း
မြန်မာနိုင်ငံကို R2P လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အကာအကွယ် ပြုပေးသင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေ စာရင်းထဲ ဂလိုဘယ် R2P လို့ ခေါ်တဲ့ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့က ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီ အဖွဲ့ အခု ရက်ပိုင်းကပဲ ထုတ်ပြန်တဲ့ အတွဲအမှတ်- ၅၆ စောင့်ကြည့်စာရင်း အစီရင်ခံစာ ထဲ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁ ရက်၊ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက သေနတ်ကျည်ဆံ အစစ်တွေ အပါအ၀င် လက်နက်တွေကို အဆင်ခြင်မဲ့ အသုံးပြုနေတာကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁၃၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီ အစီရင်ခံစာထဲ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်လည်း ဖမ်းခံထားရပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီလို့ ဂလိုဘယ် R2P အဖွဲ့က ကမ္ဘာကို အသိပေးနေပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ဟာ သူတို့ရဲ့ ရက်စက်ကျုးလွန်မှုတွေ အတွက် အရေးယူ မခံရပဲ လွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်နေတဲ့ အချက်ဟာ ၊ အရပ်သားတွေ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်တာတွေ နောက်ထပ် ပိုပိုပြီး စံနစ်တစ်ကျ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ကို ကျုးလွန်လာစေတယ်လို့ ဂလိုဘယ် R2P အဖွဲ့က ထောက်ပြထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကြား ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ရရှိထားတဲ့ သဘောတူညီချက် ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အကာအကွယ်ပြုပေးရေး R2P ကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ရာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဂလိုဘယ် R2P အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တည်ထောင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး၊ ရုံးချုပ်က အမေရိကန်၊ နယူးယောက်မြို့မှာ ထားရှိပါတယ်။
အဲဒီ အဖွဲ့ဟာ R2P ၀င်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေ အကြောင်း လေ့လာသုတေသနလုပ်ပြီး၊ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အကြံပြု ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleကန်တော်လေးညသပိတ်မှာ သေနတ်နဲ့ သေချာချိန်ပစ်ခံရလို့ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် လူငယ်တဦးသေဆုံး
Next articleအရင်က နှိမ်မိပါတယ် နောက်ဆိုကျူးကျော်ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ မနှိမ်တော့ပါဘူး